Wholesale Energy chinwiwa bhegi Mugadziri uye Mutengesi | Yingzhicai
Anodakara muchero chimiro bhegi
Homwe yesoymilk, bhegi rinokwezva, bhegi revana rekudya, bhegi remhando yepamusoro.
1. Kumira kumusoro muhomwe yesimba chinwiwa homwe.
Apple cider homwe, simba chinwiwa homwe, muchero muto homwe, uchi homwe.
2Layers laminated zvinhu: PET / LLDPE
3 akaturikidzana laminated zvinhu:
4Layers laminated zvinhu: PET / AL / PA / LLDPE, PET / AL / PA / RCPP
01 Uri kugadzirwa？
Chokwadi, isu tave tiri mumapaketi mabhegi kugadzirwa kwemakore makumi maviri nematatu, isu tinobatanidza kukosha kukuru kune kudzora kwemhando mune yedu yekugadzira maitiro.
02 Tinofanirwa kubhadhara mari yekudhinda humburumbira here?
Kwenguva yekutanga, tinoda kubhadharisa muripo weye silinda yekudhinda. Mari iyi inoenderana nehuwandu hwechigadzirwa mavara, muchina wedu une 8 mavara ekudhinda, isu tinoda 8 anodhinda humburumbira kunyanya kugadzira zvigadzirwa, uye kana iyo imwechete dhizaini dhizaini pagore yasvika imwe nhamba, isu tinodzosera mari iyi ku iwe muchimiro chehomwe.
03 Unogona kupa dhizaini? Isu tinoda here kubhadhara yako yako dhizaini yekugadzira?
Tine nyanzvi dhizaini timu inopa dhizaini yako, sekureba sekunge iwe uchitipa izvo zvakakodzera zvinhu (senge mimwe mifananidzo) uye inoenderana chigadzirwa pfungwa, magadzirirwo edu akasununguka kune vatengi, kana iyo nyowani mutengi ichida isu kuti tipe inoenderana dhizaini, isu tinotora mari shoma yepamberi yekugadzira, uye isu tinobvisa kubva pamutengo wezvese paunenge wahodha
04 Sei ndichisarudza masaga ekurongedza mukati yingzhicai?
1.We tanga tiri mumapakeji ekugadzira mabhegi kwemakore makumi maviri nematatu uye tinogona kudzivirira matambudziko mazhinji asina basa, tinogona kunyatso tarisa maitiro ekugadzira uye kuendesa nenguva.
2.We takagadza kuburitsa michina zvinoenderana nenyika zviyero, chengetedza kuchengetedzwa mukugadzirwa uye haizomise kugadzirwa (kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza kweChina kwakanyanya)
3.Fekitori yedu yakaisa jenareta yezuva, uye haizononoke kuendesa nekuda kwekushaikwa kwemagetsi (zhizha izina remagetsi rechina, uye kuitira kuchengetedza kushandiswa kwemagetsi kwevagari, pachave nemuganhu unoenderana mashandisirwo emagetsi efekitori)
Pashure: chibereko chimiro bhegi
Zvadaro: vakamira hombodo chimiro homwe
Chikafu cheGiredhi Chikamu homwe
Chikafu Kavha Bhegi
Chikafu Chekuchengetedza Mabhegi
Chikafu Kubata Bhegi
Homwe Chikafu Packaging
Snack Juice Package Bhegi